Saadaashii Rooney Oo Rumoowday Iyo Doorkii Uu Ka Qaatay Saxiixa Ronaldo – Garsoore Sports
Saadaashii Rooney Oo…
Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Weyne Rooney oo haatan tababara kooxda Derby County ayaa khamiistii saadaal ka bixiyay xaaladda suuqa ee Cristiano Ronaldo haatanna waxay u muuqataa inay rumoowday.
Weyne Rooney ayaa saadaal dad badan ay ka yaabeen ka bixiyay xaaladda suuqa ee Cristiano Ronaldo habeenimadii khamiista markaas oo superstar-ka reer Portugal uu ‘qarka u saarnaa’ inuu ku biiro kooxda Manchester City kahor inta aanay si layaab leh Jimcadii maanta uga bixin tartanka.
Kooxda Manchester United oo tartanka kusoo biirtay ayaa dalab ka gudbisay Ronaldo goordhowna waxay xaqiijisay inay heshiis la gaartay kooxda Juventus si ay ugala soo wareegto xiddigoodii hore ee Cristiano Ronaldo.
Weyne Rooney oo haatan leyliya kooxda Derby County ayaa shan xilli ciyaareed kaga garab ciyaaray Ronaldo Old Trafford, labadan xiddig ayaana qeyb muhiim ah ka ahaa kooxda United oo ku guuleysatay seddex horyaal oo Premier League ah iyo hal Champions League mudadaas.
Rooney ayaa habeenkii khamiista sheegay inuu shaki aad u weyn ka qabo in Ronaldo uu ku biirayo City xilli loo maleynayay in heshiiska gebo-gebo uu yahay kahor inta aanay City shaacin inay ka baxday baacsigii xiddigan.
Tababaraha Derby ayaa dareensanaa inuu qiyaasi karin in Ronaldo uu u dhaqaaqo kooxda ay xafiiltamaan Man United ee Man City sabab la xiriirta ‘sumcadiisa’.
Markii la weydiiyay fikirkiisa ku aaddan xaaladda Ronaldo ee ah inuu ku biiro City, Rooney wuxuu ku jawaabay: ‘Ma aqaano waxa laga sameeynayo, daacaddii”